अन्तरवार्ता | Social, musical and literary material
Category Archives: अन्तरवार्ता
October 27, 2020 nrsubba
रेडियो वार्ताको फेसबुक लाइभ रेकर्ड,
साभार: संचालक तथा कैलाश खाकी श्रेष्ठ (विद्यावारिधि शोधार्थी )
Aired from BFM 91.2 on 26th October at7pm- 8 pm
मेरो साहित्य लेखन तीसको देशकदेखि सुरु भएको हो । जुन बेला म साहित्य क्षेत्रमा लागेको थिएँ । त्यतिबेला मैले कवितालाई प्राथमिकतामा राखेको थिएँ । त्यतिबेला खुब कविता लेखियो । धेरै गोष्ठी र कवि सम्मेलनमा जोडतोडले कविता सुनाइयो । दर्शक र श्रोताबाट खुब प्रशंसा पनि पाइयो । पछिल्लो समयको कुरा गर्नुहुन्छ भने मैले खास गरी गीत र कवितालाई प्राथमिकतामा राखेको छु । यो मेरो बाध्यता पनि हो । किन भन्नुहुन्छ भने अन्य विधा लेख्दा बढी समय खर्च हुने भएकाले मैले गीत र मुक्तक लेखनलाई अगाडि बढाएको हुँ । यो विधा छोटो समयमै मनमा उठेका भावनालाई पस्कन सजिलो हुने हुँदा मैले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छु । हुन त यी विधाबाहेक अन्य विधामा कलम चलाउन छोडेको चाहिं होइन । अरु पनि लेखिरहेको छु । Continue reading न्यू सृष्टि अन्तर्वार्ता →
सुकुनाको लागि अन्तरर्वार्ता
September 24, 2011 nrsubba Leaveacomment
(साहित्यकार नवराज सुब्बासित कवि मीनकुमार नवोदितले सुकुनाको लागि लिनु भएको अन्तर्वार्ता)
प्रश्नः तपाईको लेखन कसरी सुरु भयो ?
उत्तरः विद्यालय तथा क्याम्पसको विद्यार्थीजीवन अर्थात् तीसको दशक मेरो साहित्यिक यात्राको प्रारम्भिककाल हो । मेरा गुरु, विद्यालयको साहित्यिक तथा सांगीतिक वातावरण र मेरो बाल्यकालको विशिष्ठ वातावरण बीच मेरो साहित्यिकयात्रा आरम्भ भयो । विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्ययनरत रहेको बेलामा भइरहने साहित्यिक प्रतियोगितामा निबन्ध, गीत, कवितातर्फ पुरस्कृत हुनुले पनि मलाई लेखनमा थप प्रोत्साहन मिल्यो ।
प्रश्नः साहित्य किन लेख्नु हुन्छ?
उत्तरः सकेसम्म जीवन र जगतलाई उज्यालो बनाउन, पाठकलाई खुशी पार्न, आत्मप्रकाशन गर्न र अभिलेखन गर्नलाई म साहित्य लेखिरहेछु । हुन त मभित्र चेतना पसेपछि नै साहित्यको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने भावको बिजारोपण भएको थियो । अघि भनेझैं विद्यार्थीकाल देखि नै सिर्जना गरेता पनि आजसम्म म निरन्तर साहित्यको अध्ययन र सिर्जनामा अभ्यासरत छु । कहिलेकाहिँ छक्क पर्छु, फूर्सद नहुँदा अथवा इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि बाध्यतावश सिर्जना गरिरहेछु ।
प्रश्नः साहित्य लेखेर के पाउनु भयो?
उत्तरः साहित्य लेखन मेरो पेशा होइन । त्यसैले मैले साहित्य क्षेत्रबाट केही पाउने आशा राखेको पनि छैन । मैले यो क्षेत्रलाई सकेको दिएको छु । तर यस क्षेत्रबाट मैले सोचेभन्दा धेरै पाएको छु । पाठकहरूबाट पाएको मायालाई नै मैले सर्वोत्कृष्ट पुरस्कारको रूपमा लिएको छु । Continue reading सुकुनाको लागि अन्तरर्वार्ता →
साहित्य पवित्र परिकल्पना हो
July 20, 2011 nrsubba Leaveacomment
हाल जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय मोरङको वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक (प्रमुख) पदमा कार्यरत नवराज सुब्बा जनस्वास्थ्य प्रशासक मात्र हैनन् । उनी एक सफल र्सजक पनि हुन् । करिव तीसको दशकदेखि कविता, गीत, निबन्ध, अनुसन्धान लेखनमा अनुभव संगालिसकेको सुब्बाले दर्जन बढी साहित्यीक कृति र संगीत सिर्जना गरिसकेका छन् । उनका जीवन मेरो शब्दकोशमा कवितासङ्ग्रह (२०६३), मनको मझेरी निबन्धसङ्ग्रह (२०६४), बीच बाटोमा ब्यू“झेर कवितासङ्ग्रह (२०६५), सहिदलाई सलाम गीतसङ्ग्रह -२०६७), यात्रा आधा शताब्दीको कवितासङ्ग्रह (२०६८) प्रकाशित भइसकेका छन् । यतिमात्र हैन सुब्बाका आधा दर्जन देशभक्तिपूर्ण गीतहरु श्रोतामाझ आइसकेका छन् । नेपालका विभिन्न जिल्लामा तीन दशकदेखि जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनमा काम गरेर पेशागत अनुभव संगालीसकेका सुब्बाले पहिलो अनलाईन विश्व वेभक्याम कविता प्रतियोगिता २०६४मा प्रथम स्थान प्राप्त गरेका छन् भनें दर्जन बढी संघ संस्थाहरुबाट पुरस्कृत तथा सम्मानित समेत भइसकेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै बहुमुखी प्रतिभा भएका सुब्बासंग गरिएको कुराकानीका केही अंशहरु (मोहन भट्टराई)
साहित्य क्षेत्रमा कहिलेदेखि कसरी लाग्नु भयो ?
साहित्य क्षेत्रमा म बाल्यकालदेखि नै लागेको हो । खास गरेर विद्यार्थीकालदेखि नै । विद्यालयमा हुने मासिक कविता गोष्ठी, अन्य कार्यक्रमहरुमा भाग लिंदा गुरुहरुले हौसला दिनुहुन्थ्यो । त्यसैले अगाडि बढ्दै गएँ ।
नेपाली साहित्यमा पश्चिमा शैलीको प्रयोग बढेर गएको छ, यो कत्तिको सहि छ ?
यसले कतिपय राम्रा कुराहरु प्रयोग भइरहेका छन् भनें हुबहू नक्कल गर्दा चाहीं हाम्रो नेपालीपन हराएर जाने खतरा पनि छ । लामो समयदेखि नेपालीले एउटा छवी नै बनाइसकेका छौं । अहिले आएर पश्चिमा साहित्य मात्र हैन, विश्वमा आएको परिवर्तनले पनि नेपाली साहित्यलाई असर पारेको छ । तर पनि नेपाली बाङ्मय, साहित्यको आफ्नोपनलाई जोगाउन जरुरी छ । Continue reading साहित्य पवित्र परिकल्पना हो →
Archives Select Month October 2020 (2) September 2020 (4) August 2020 (4) May 2020 (1) March 2020 (1) February 2020 (1) August 2019 (4) July 2019 (1) March 2019 (4) February 2019 (3) January 2019 (2) December 2018 (3) November 2018 (85) October 2018 (4) September 2018 (10) August 2018 (3) July 2018 (8) June 2018 (1) May 2018 (3) April 2018 (1) February 2018 (1) January 2018 (2) December 2017 (1) August 2017 (1) July 2017 (1) June 2017 (2) April 2017 (1) February 2017 (2) October 2016 (1) September 2016 (3) March 2016 (1) December 2015 (2) October 2015 (2) May 2015 (3) January 2015 (2) October 2014 (1) August 2014 (2) March 2014 (1) December 2013 (1) November 2013 (1) September 2013 (2) July 2013 (3) April 2013 (5) March 2013 (5) February 2013 (5) January 2013 (2) December 2012 (3) November 2012 (5) September 2012 (3) August 2012 (3) July 2012 (2) June 2012 (2) May 2012 (6) April 2012 (4) March 2012 (8) February 2012 (5) January 2012 (5) December 2011 (2) November 2011 (6) October 2011 (9) September 2011 (12) August 2011 (6) July 2011 (6) June 2011 (5) May 2011 (9) April 2011 (4) March 2011 (7) February 2011 (11) January 2011 (6) December 2010 (6) November 2010 (7) October 2010 (15) September 2010 (20) August 2010 (6) July 2010 (4) June 2010 (7) May 2010 (11) April 2010 (9) March 2010 (12) February 2010 (9) January 2010 (2) December 2009 (3) November 2009 (5) October 2009 (3) January 2009 (13) December 2008 (6) November 2008 (3) October 2008 (28) August 2008 (4) March 2008 (1) February 2008 (2) April 2007 (24)